Chief Golden |
Chief Golden waa wax soo saarka ee Games Sayniska. Ciyaartoyda ka ciyaari kara booska ka qalabka ay mobile sida waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida naadi lacagta mobile mashiinka. Ciyaarta ayaa waxa ay ku salaysan North American Red Indians iyo waxay bixisaa waxoogaa wanaagsan oo muuqaalada bonus in ay sii ciyaartoyda khali. Read dib u eegis hoose si aad wax badan ka ogaatid.
Golden Afyare online Chief leeyahay 4 saf iyo 5 duntu. Waxaad marka hore ku bilow 10 paylines oo ku kici kara in ay 100. Tani mobile boosaska lacag uu leeyahay asalka hodan ah la dhagaxyada iyo tepees Indian Red arki karo.
Waxaad leedahay laba qaybood oo ka mid ah calaamadaha on duntu ku. marka hore waa ku yar-qiimaha calanka card ciyaareed ee A, J, K, S, 9 iyo 10. Ku labaad waa astaanta-qiimaha sare oo ay ka kooban of cirif totem a, orso brown iyo marwada Indian ah Red.
In this mobile mashiinka naadi lacagta online, aad leedahay icon ah Wild wakiil ka ah calaamad duurjoogta ah midabo. duurjoogta ah Tani waxay ku Baddasha calaamado kale oo ku saabsan duntu ku, laakiin ma ah calaamad firdhin Bonus Golden. Afyare Tani waxay sidoo kale la iman Wild Chief a Ballaarinta.
duurjoogta Tani fidin doonaa daboolaan ambadeen oo dhan on taas oo uu ku yaal iyo caawiyaan degtey guuleystay gaynta. Waxa kale oo horumari doona payline kulan ee u dhaxaysa 50 iyo 100. Si kastaba ha ahaatee, tani waa ku tiirsan qiimaha aad tirka.
Beauty of this mobile mashiinka naadi lacagta online waa in uu leeyahay garoomo dhowr ah sifooyinka bonus. Waxaa jira muujinta a Bonus Chief Golden. wareega Tani waxey imaneysaa marka aad dalka ugu yaraan 3 Bonus calaamadaha firdhin Golden on jagooyinka la arki karo on duntu ku. Marka tan la gaadho, Waxaad u ciyaari kartaa mid ka mid ah kuwan soo socda mini-kulan.
A Free dhigeeysa: Waxaa lagu siinayaa 5 dhigeeysa free bilowga. Kuwani dhigeeysa Free lagu qamaaray kartaa guud ahaan ugu badan ee 30 dhigeeysa free. Faa'iida khamaarka waa in aad sidoo kale waayi kartaa 5 dhigeeysa free.
A Cash Canyon: Halkan waxa aad leedahay si ayna miiqdaan wheel a of maal si aad u hesho abaal marin lacag caddaan ah.
A Totem maal Bonus Feature: Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad si loo doorto ulaha totem inuu u muujiyo loo laablaabi. Waxaad fuuli doonaa Sallaan multiplier a sida aad Bandhigtay qiimaha badan waxa. Sida aad gaarto sarreysey, aad abaalgudkiinna aad ka soo ururin doonaa. By caga shan calaamado kala firdhiso Bonus Golden. Waxaad heli doontaa abaal marin weyn oo hal mar ah lacag caddaan ah.
Marka laga reebo sifooyinka kor ku xusan, sidoo kale waxaa jira Bet iyo gunno Astaanta maqan muuqaalada Big in ay sii enthrall ciyaartoyda Afyare. Kulankaan ayaa RTP ah oo u dhexeeya 94.12% iyo 98.14% taas oo ku filan in lagu soo sasabaya ciyaartoy dhinaca Afyare this.